Tetiandro litorjikan'ny Fiangonana katolika siro-malabara - Wikipedia
Ny tetiandro litorjikan'ny Fiangonana katolika siro-malabara dia noraiketina araka ny fizotran’ny tantaram-pamonjena. Amin’ny fifantohana amin’ny fiainana ara-tantaran’i Jesoa Krisy, ny mpino dia tarihina ho amin’ny fahatanterahana eskatolojika (izany hoe ny fiadanana any an-danitra) manaraka io fandaminana manokana ny fizaran-taona litorjika io. Ny taom-piangonana dia ahitana fizaran-taona misy fito herinandro eo ho eo isanisany, nefa atao izay hifanarahany amin’ny tetiandro manara-masoandro. Ny fandaminana ny fizaran-taona litorjika dia miankina amin’ny zava-niseho fito lehibe indrindra izay aorina amin’ny fankalazana ny tantaram-pamonjena. Ireto avy izy ireo:
Ny fizaran-taon’ny tetiandro litorjikan’ny Fiangonana katolika siro-malabara sy ny an'ny Fiangonana katolika kaldeana dia omena etsy ambany:
1 Filazàna tamin'i Maria (Subara)
2 Ny Epifania (Denha)
3 Fifadian-kanina Lehibe (Sawma Rabba)
4 Fitsanganan-ko velona (Qyamta)
5 Apostoly (Slihe)
Ny herinandron’ny Filazàna mialoha ny fahaterahan'i Jesoa tamin'i Maria(Subara) dia fizaran-taona litorjika iray. Ny taona litorjika dia manomboka amin’ny fanambaràna sy ny fankalazana ny fihaonana ara-tantaran’Andriamanitra amin’ny olombelona tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy, ilay endrik’olombelon’ny personan’Andriamanitra. Ny teny siriaka hoe Subara (midika hoe "fanambaràna mialoha"), izay iantsoan’ireo Fiangonana ireo ny herinandro dimy na enina ao amin’ny taona litorjikany, dia fanambaràna mialoha sady filazana amin’ny fomba manetriketrika ankalazana miaraka amin’io vaovao fara tampony sady mitondra fahasambarana io ny fanetren-tenan’Andriamanitra ho amin’ny fahalemen’ny olombelona mba hanandratana azy amin’ny fahambonian’Andriamanitra.
Manomboka amin’ny Alahady alohan’ny 01 Desambra sy mifarana amin’ny fetin’ny Epifania, ny fetin’ny batisan’ny Tompo, io fizaran-taona. Io fizaran-taona io dia mivoatra ao amin’ny tontolon’ny zava-miafin’ny fahatongavana ho nofo izay tanteraka amin’ny fahafenoan’ny fotoana. Mahatsiaro ny filazàna mialoha ny hahaterahan’i Joany Batista koa ny Fiangonana mandritra ireo andro ireo, dia i Joany izay mpialoha lalana an’i Jesoa, ary koa ny zava-nitranga mahafalin’ny nahateran’i Joany Batista.
Amin'ny maha fanomanana ny fankalazana ny zava-miafin’ny fahatongavana ho nofo io fizaran-taona io, dia mampahatsiahy ny Famoronana, ny tsy fankatoavan’ireo razantsika sy ny vokatr’izany, ny fahantran’ny olombelona tapaka, ny fampanantenana ny famonjena atolotr’Andriamanitra, ny faminaniana ny amin’ny Mpamonjy. Mandritra io fizaran-taona io dia eritreretina koa ny anjara asan’i Maria eo amin’ny tantaran’ny teti-pamonjena. Ny maha zava-dehibe an’i Maria izay mitarika ho amin'ny fitsaohan'ny Fiangonana azy dia miankina amin’ny fifandraisany amin’i Jesoa, ka singanina manokana ny maha renin’i Jesoa azy. Ny fankalazana azy dia anterin’ny fety roa tena manetriketrika: ny Fitorontoronana tsy Voaloto (latina: Immaculata Conceptio) amin’ny 8 Desambra sy ny Fiarahabana an'i Maria renin’i Jesoa amin’ny Zoma farany amin’io fizaran-taona io. Ny Fiangonana dia manatanteraka fifadiana amin’ny 01 hatramin’ny 25 Desambra amin’ny fanomanana ny Noely; io fari-potoana io dia atao hoe "Karemy 25 Andro".
Ireo herinandron’ny Epifania dia manomboka amin’ny Alahady akaikin’ny fetin’ny Epifania ka mifarana amin’ny fanombohan’ny Fifadian-kanina lehibe. Ny teny siriaka hoe Denha dia midika hoe "fiposahan’ny masoandro". Mandritra io fotoana io dia mieritreritra ny amin’ny fisehoan’ny Trinite Masinasy ny fanambaràna an’i Kristy, fahazavan’izao tontolo izao ny mpino. Ny batemy tao amin’ny ony Jordany dia zava-mitranga voalohany ara-tantara tamin'ny nambaràna ny Trinite amin’ny olombelona tao amin’ny maha olona an’i Jesoa Kristy. Amin’io fizaran-taona io dia mankalaza ny fetin'ny Olomasinamifandray amin’ny fisehoan’ny Mpamonjy.
Fetin’ny Md. Joany Batista amin’ny Zoma voalohan’ny Eopifania;
Mandritra ireo herinandro ny Fifadian-kanina Lehibe, ny mpino dia misaintsaina sy mieritreritra ny fiainan’i Jesoa ampahibemaso ary indrindra ny fijaliany (Pasiona) sy ny fahafatesany ary ny fandevenana azy izay fara tampony amin'izany. Izany fizaram-potoana izany dia manomboka 50 andro alohan’ny Paska amin'ny "Alahadin’ny Peturta" ka ao anatiny ny fari-potoan’ny Karemy Lehibe sady mifarana amin’ny Alahadin’ny Fitsanganan-ko velona. Ny teny siriaka hoe Peturta dia midika hoe "fijerena ny any aoriana" na "fampihavanana".
Fotoana omen’Andriamanitra hibanjinana lalina ny fianinan’ny tsirairay sy haharesy lahatra ny amin’ny halehiben’ny fitahiana azo amin’ilay Andriamanitra be fitiavana, dia ny Famoronana, ny hatsaram-pom-pamonjena, ny fahalavoan’ny olobelona, ny tsy fahafahan’ny olombelona hamonjy tena, ny fampanantenana ny famonjena, ny fanavotana tamin’ny alalan’i Jesoa zanany ary ny fiaretan’i Kristy fijaliana. Ny mpino dia miditra amin’ny herinandron’ny Fifadian-kanina Lehibe, ka mankalaza ny fahatsiarovana ny mpino rehetra maty amin’ny Zoma farany amin’ny Denha.
Araka ny fomba fijery eklezialy sy litorjikan’io fanao io, ireo herinandron’ny Fifadian-kanina Lehibe ireo dia fotoana hahatsiarovana am-bavaka manokana ireo olo-malala maty, ny fahafoizan-tena, ny fiantrana ny mahantra, sns, ary mba hanomanan-tena amin’ny fahafatesana sy amin’ny fitsanganan-ko velona tsy arahim-pijaliana ao amin’i Jesoa Kristy. Mandritra ny fifadian-kanina dia tsy mihinan-kena na atody na trondro na zavatra vita amin’ny ronono ary ny ankamaroan’ireo sakafo tiana indrindra ny mpiono ao amin’ny Fiangonana siro-malabara, sady tsy manao firaisana ara-nofo mandritra ireo andro rehetra ireo, isan’izany ireo Alahady sy ny andro fety. Talohan’ny fanjanahantany eoropeana dia tsy nihinan-kanina afa-tsy indray mandeha isan’andro (aorian’ny amin’ny telo tolakandro) ny Indiana Nasrany mandritra Fifadian-kanina Lehibe. Ireto avy ireo fetin’ny Keremy:
Ireo herinandron’ny Fitsanganan-ko velona lehibe dia manomboka amin’ny Alahadin’ny Fitsanganan-ko velona ka mizotra mankany amin’ny fetin’ny Pentekosta. Mankalaza ny Fitsanganan-ko velon’ny Tompo ny mpino mandritra ireo herinandro fito ireo: ny fandresen'i Jesoa ny fahafatesana, ny fandreseny ny fahotana, ny fandreseny ny fijaliana ary ny fandreseny an’i Satana. Io no fizaran-taona ho an’ny fifaliana lehibe noho ny fiainam-baovao azo vokatry ny fitsanganan’ny Mpamonjy ho velona. Mahatsiaro ny zava-nitranga niseho taorian’ny fitsanganan’i Kristy ho velona koa ny Fiangonana, ka isan’izany ny fisehoan'i Jesoa tamin'ireo mpianany sy ny fiakarany any an-danitra. Ho an'ny fivavahana kristiana tatsinanana dia fety lehibe indrindra ny fetin’ny Fitsanganan-ko velona ao amin’ny taona litorjika. Ny herinandro voalohany ao amin’ny fizaran-taona dia ankalazaina amin’ny maha "herinandron’ny herinandro" azy satria herinandron’ny fitsanganan’i Kristy ho velona izy.
Ny herinandron’ny Apostoly dia manomboka amin’ny andron’ny Pentekosta, 50 andro aorian’ny Alahadin’ny Fitsanganan-ko velona. Mandritra ireo andro ireo, ny mpino dia mahatsiaro ny fanokanana ny Fiangonana sy ny asan’ireo Apostoly ary ny ny Rain’ny fiangonana, izay nanorenana ny Fiangonana. Mieritreritra ireo zava-dehibe teo amin'ny fiainan'ny Fiangonana voalohany toy ny fifandraisan'ny mpirahalahy, ny famakiana ny mofo, ny fizaràna ny harena, ireo vokatry ny Fanahy Masina ary ny fanomezam-pahasoavany. Ny fielezan'ny fiangonana eran’izao tontolo izao sy ny fitomboany dia tsarovana koa mandritra io fizaran-taona io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_litorjikan%27ny_Fiangonana_katolika_siro-malabara&oldid=977929"
Voaova farany tamin'ny 2 Desambra 2019 amin'ny 04:47 ity pejy ity.